Ngowuphi umsebenzisi ophethe i-Intanethi okhawulezayo kwi-4G LTE? Isiphelo sendlela on 🥇
E-Itali, uthungelwano lweselfowuni lwenze utshintsho olukhulu xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo kwaye emva kokudityaniswa phakathi kwabaqhubi abaphambili abane kwi-Intanethi, Wind kunye nesithathu, sinokungena kwicandelo lomqhubi weIliad, ethi ngamaxabiso ayo asezantsi yenza ukhuphiswano olukhulu nabanye abasebenzisi bemveli (ngaphezulu kwezigidi ezi-3 zabasebenzisi ngonyaka onesiqingatha). Kodwa phakathi kwabo bonke abaqhubi Zeziphi onokukhetha kuzo kwisantya sonxibelelwano lwakho lwe-Intanethi? Kulula ukuthatha izithembiso ezingeyonyani zentengiso kunye nemizobo ebonelelwa ngumsebenzisi uqobo (uhlala ebubuxoki) kwaye walatha kumqhubi ongalunganga wesixeko sethu okanye indawo esihlala kuyo.
Ukuba ngenene sifuna ukufumanisa nguwuphi umqhubi ophathwayo one-Intanethi ekhawulezayo kwi4G LTE Kwindawo yethu, ufikelele kwisikhokelo esifanelekileyo: apha siza kukubonisa zonke iimvavanyo ezizimeleyo ezenziwa ngabantu besithathu okanye ngabasebenzisi babaqhubi abo ngokwabo, ukuze wazi ngokuchanekileyo ukuba kukho ukhuseleko olufanelekileyo kwisitalato esihlala kuso (kubalulekile unesantya esihle) kwaye sisiphi isantya esinokufikelela kuso ngomsebenzi okhethiweyo.
FUNDA OKANYE: Usetyenziso lwe-data test network
Umqhubi we-Intanethi okhawulezayo kwi-LTE
Kwizahluko ezilandelayo siza kukubonisa iimvavanyo ezenziwa ngabantu besithathu ukujonga isantya sonxibelelwano lwe-Intanethi kwilizwe liphela kwaye, kwabo bafuna ukwazi isantya esixekweni okanye esitratweni apho bahlala khona, siza kukubonisa izixhobo. ukukwazi ukwenza uvavanyo ngokuzimeleyo, ngaphandle kokuthenga i-SIM kuqala. Ngelo xesha Siza kubona itekhnoloji ye4G LTE kuphela, isasazeke kakhulu kwaye iyakwazi ukunika isantya esihle phantse kuzo zonke iimeko (sifumana i-5G kuphela kwizixeko ezikhulu).
Uvavanyo lomzimba oluzimeleyo
Ukuba sifuna ukwazi kwangoko ukuba ngubani owona mqhubi ufanelekileyo wase-Itali ngesantya esiphakathi kumnxeba oshukumayo, sinokuzikhuphelela kwaye sihlalutye iPDF enikezelwa yiSpeedTest, ethi ngonyaka izuze inethiwekhi ekhawulezayo yeselfowuni e-Itali.
Ngokwigrafu kunye nedatha echazwe lolu phononongo, inethiwekhi ye-LTE ekhawulezayo e-Itali Tre umoya ngamanqaku ewonke angama-43,92 (ophumelele ibhaso leSpeedtest). Phantse amanqaku ali-10 ngasemva esiwafumanayo TIM ngamanqaku angama-32,95, Iliad ngamanqaku angama-31,34 kunye nomsila omangalisayo inthanethi, efikelela kuvavanyo ngamanqaku angama-30,20 kuphela. Ezi datha zinezinto ezininzi ezimangazayo eziwisa uninzi lwezinto: I-Wind Tre iyakhokela kwaye ibetha i-TIM (ebisoloko ithathwa njengeyona ibalaseleyo e-Itali) kwaye iVodafone iye yawa kabuhlungu, ikwabethwa yi-Iliad (ukufika kokugqibela).
Ukudibanisa ezi datha nokuzitolika ngokuchanekileyo kufuneka siqwalasele enye umzimba ozimeleyo wovavanyo lwesantya, koko kukuthi OpenSignal (Abanini besicelo esidumileyo). Ngokufikelela kwiphepha le-broadband snapshots, sinokujonga kwimimandla ephambili yase-Italiya, ngokuthelekisa ukugubungela kwabo bonke abaqhubi ezixekweni, kwiidolophana nakwiindawo ezisemaphandleni.
Ngokuhlalutya ngononophelo iitshathi, siyabona ukuba i-Fastweb kunye ne-TIM ziqhuba kakuhle phantse kuzo zonke iimeko (ngakumbi kumadlelo), IWindTre ikwindawo yesibini kwiidolophu kwaye ilawula kwiindawo ezisemaphandleni kwaye iVodafone ikwindawo eyiyeyona isebenzayo (ukuba iindawo ezisezidolophini zaseLombardy naseSicily azifakwanga). Umsebenzi we-Iliad ulahlekile kule grafu, awuthathelwa ngqalelo kuvavanyo (luya kufakwa kwikamva).
Usivavanya njani isantya sakho senethiwekhi ngokwakho
Asifuni ukulandela iingcebiso ezizimeleyo zokuvavanya kwaye sifuna "ukuchukumisa" isantya senethiwekhi kwindawo yethu okanye ekhaya? Kule meko, sicebisa ukuba usebenzise ifayile ye Ukugubungela kunye nemephu yesantya enikezelwa kwiNperf, iyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ukusuka kule ndawo kuya kwanela ukukhetha umqhubi ukuba avavanye kwaye aqinisekise ukhuseleko lwenethiwekhi (i-LTE kunye ne-LTE ePhambili) kunye nesantya sokwenyani esichazwe kuvavanyo olwenziwe ngabasebenzisi. Nje ukuba ukhethe umqhubi, cofa Ukuvalwa kwenethiwekhi okanye yakhe Isantya sokukhuphela Ukukhetha ukuba loluphi uvavanyo oza kulwenza uze usebenzise imephu engezantsi ukukhangela isixeko, indawo okanye isitalato esihlala kuso okanye apho sifuna ukuvavanya khona, sisebenzisa nendawo yokukhangela efumaneka kwinxalenye ephezulu yemephu. Esi sixhobo sinokuba luncedo kakhulu, umzekelo xa kufuneka sithenge indlu entsha okanye irente, ukuze sikwazi ukukhangela ukuba ngubani ophetheyo olungileyo kwaye ukuba kukho imfuneko yokutshintsha i-SIM ngelixa ugcina inombolo, njengoko kubonakala kwisikhokelo. Wenza njani ukuphatheka kwamanani kunye notshintsho lweefowuni.
Ngenye indlela sinokusebenzisa isicelo seOpenSignal, ifumaneka simahla kwi-Android ne-iPhone.
Ngokufaka esi sicelo kunye nokubonelela ngazo zonke iimvume eziyimfuneko, siya kuba nakho ukuqinisekisa ubungqina be-LTE kunye nesantya se-intanethi eshukumayo kuyo nayiphi na indlela okanye indawo e-Itali; ukuqhubeka, konke ekufuneka sikwenzile kukuvula imenyu emazantsi imephu, linda ukufunyanwa kwendawo yethu kwaye ucinezele phezulu kwimenyu Zonke i-2G / 3G / 4G, ukuvula imenyu apho unokukhetha khona iselfowuni ukuvavanya kunye nohlobo lwenethiwekhi (kolu vavanyo sicebisa ukuba ushiye umba kuphela 4G).
Ngeemvavanyo zemibutho ezimeleyo kunye neemvavanyo esinokuzenza kunye nekhompyuter okanye i-smartphone, sinokufumana ngokukhawuleza eyona ndawo isebenzayo ye-Intanethi kwindawo yethu, ukuze sihlale sihamba ngesona santya siphezulu, ngaphandle kokuwela kwimigibe nakwizibhengezo Abasebenzisi bahlala behamba kumabonwakude okanye kunomathotholo. Iimvavanyo ezizimeleyo zithi I-Wind Tre yeyona ndawo ihamba phambili e-Itali, kodwa esi siphumo kufuneka sithathwe ngononophelo: kubhetele ukujonga ukogquma ngokwakho kwaye uqiniseke ukuba kuhamba kakuhle ekhayeni lethu okanye eofisini.
Ukuba sifuna uthungelwano olukhawulezayo lweselfowuni kuya kufuneka sigxile kwi-5G, engekasasazeka kodwa kwinqanaba eliphezulu kune-4G; ukwazi okungakumbi sinokufunda isikhokelo sethu Uyiqinisekisa njani i-5G.
Ukuba, ngokuchaseneyo, sifuna indlela yokuqinisekisa ukugubungela i-fiber optic kumgca osisigxina, sicebisa ukuba ufunde amanqaku ethu Ukugubungela ifayibha ye-TIM, Fastweb, Vodafon, WindTre kunye nezinye mi Eyona fiber optic: jonga ukogquma kunye nokunikezelwa.